ဘာသာစကား မြန်မာဘာသာစကား အင်္ဂလိပ်၊ စပိန်၊ ပေါ်တူဂီ၊ ပြင်သစ်၊ ဂျာမနီ၊ ဒူစ်ထ်၊ ရုရှ၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ ------------------- မြန်မာဘာသာစကား အဖရိကန်၊ အရ်ဘားနီးယား၊ အမ်ဟားရစ်ဒ်၊ အာရဗိ၊ အားမေးနီးယား၊ အဆန်းတေး၊ ဘဲင်ဘား၊ ဘင်္ဂါလီ၊ ဘူဂါးရီးယား၊ ကီဘူနိုး၊ ချီချဲဝါ၊ တရုတ်၊ ချင်းဆင်းဂါး၊ ခရူးရှင်း၊ ချက်စ်၊ ဒါးနီးယား၊ ဒီးအိုလ၊ အီးဝါ၊ ဖါးရ်စီ၊ ဖုန်းဘဲ၊ ဂါး၊ ဂျော်ဂျန်း၊ ဂျီးကူယူ၊ ဂရိ၊ ဂူဂျရသီ၊၊ ဟား ခါး-ချင်း၊ ဟိန္ဒီ၊ ဟေဗြဲ၊ ဟန္ဂားရီးယား၊ အီလောင်းဂူ၊ အီတလီ၊ ဂျဗားနီးယား၊၊ ဂျဗားနီးယား၊ ကန်နဒါ၊ ကီမား၊ ကင်ဂျာဝမ်ဒါ၊ ကီဟိ၊ ကိရူဒီ၊ လပ်ဗီယား၊ လပ်ဗီယား၊ Lingála လူဂန္ဓာ၊ လူအား၊ မားစီးဒီးယား၊ မားဒီယာ၊ မာလာဂါစီ၊ မာလဂျလမ်၊ မာရသီ၊ မာဖန်စီ၊ မင်းတပ်၊ မီးဇို၊ မွန်ဂိုးလီးယား၊ နေပါး၊ ငွန်း၊ အိုရီးယား၊ အိုရိုမို၊ ပိုင်သဲ၊ ပိုးလစ်၊ ပိုဂျဘီ၊ ရောမနီးယား၊ ဆားဗီးယား၊ ဆိုနာ၊ စိန်ဒဟီး၊ Sinhala စလိုဗီးယား၊ စလိုဗင်း၊ စွာဟီလီ၊ ရွှေဒီယား၊ ထဂါးလုတ်၊ ထိုင်ဝမ်၊ တာမေးလ်၊ တီးတိန်၊ တီလီဂူ၊ ထိုင်း၊ ထန်ခါလ်၊ တုမ်ဘိုဂ၊ တူရကီ၊ ယူကရေးနီးယား၊ ယူရီဒူ၊ ဗိုင်းပိုင်း၊ ဗီယက်နမ်၊ ဇီချောင်ဂါးနာ၊ ဇို။
1. အဘိုးဖြင့် ရွေးယူခြင်း
ကုန်ပစ္စည်း သို့မဟုတ် လူတစ်ဦးတစ်ယောက်အား ပြန်လည်ရွေး ရန် တောင်းဆိုထား သောဈေးအတွက် ပေးချေရသည့်တန်ဘိုး (ငွေ) ကို အပြုသဘောဆန်သည့် အစားထိုးရွေးနှုတ်ကယ်တင်ခြင်းအဖြစ် ဓမ္မ ဟောင်းကျမ်းတွင် မကြာခဏအသုံးပြုထားပါသည်။ ဓမ္မသစ်တွင် “ရွေး နှုတ်ခြင်း” ကို ပေးချေရသည့်ငွေဟု ဖော်ပြထားသည်။ (မဿဲ ၂၀း၂၈ မာ ၁၀း၄၅၊ ထွက် ၂၁း၃၀၊ ဟေ ၄၃း၃၊ တော ၃၅း၃၁-၃၂)
အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းသည် လူသားတို့အားလုံး၏အပြစ်များကို ယေ ရှုထံသို့ လွှဲပြောင်းပေးသည့် အခန်းအနား တစ်ရပ်ဖြစ်သည်။ ဓမ္မဟောင်း ကျမ်းတွင် ယဇ်ကောင်၏ခေါင်းပေါ်လက်တင်ခြင်းအားဖြင့် အပြစ်ဖြေလွှတ် ခဲ့သည်။ ဓမ္မသစ်တွင် ယောဟန်ထံမှ ယေရှုဗတ္တိဇံ ခံယူခြင်းကို ဆိုလိုသည်။ ဟေဗြဲနှင့် ဂရိဘာသာစကားအရ အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းသည် အပြစ်သား များ ဘုရားသခင်နှင့် စစ်မှန်သော ဆက်သွယ်မှုရဖို့အလို့ငှာ ယေရှုအပေါ်သို့ အပြစ်များလွှဲချခြင်းဟု အဓိပ္ပါယ်ရသည်။ ဓမ္မသစ်ကျမ်းက အပြစ်ဖြေလွှတ် ရန်အတွက် ယဇ်ပူဇော်ခြင်းကို ယေရှု၏ဗတ္တိဇံခံခြင်းနှင့်ကားတိုင်ပေါ်အ သေခံခြင်းဖြင့် ပုံဥပမာပြထားသည်။
ဓမ္မဟောင်းကျမ်းတွင် အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းဟူသောစကားလုံးကို အကြိမ် (၁၀ဝ) နီးပါးအသုံးပြုထား၍ ဟေဗြဲဘာသာဖြင့် ‘Kaphar’ အပြစ် ဖြေလွှတ်ခြင်းဟူ၍ ဖော်ပြထားလေ့ရှိသည်။ ဣသရေလလူမျိုးများ၏ အပြစ်ဝန်ချတောင်းပန်ခြင်းနှင့် ဆိတ်ခေါင်းပေါ်သို့ လက်တင်၍ အပြစ်များ လွှဲအပ်ခြင်းကိုအပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းဟု ဟေဗြဲဘာသာစကားကို ပြန်ဆိုသူ များက ဆိုထားသည်။ (တော ၅း၈၊ ဝတ် ၂၃း၂၇၊ ၂၅း၉၊ ၁၆း၂၀)
ဓမ္မဟောင်းကျမ်းတွင် အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းသည် ဖုံးကွယ်ခြင်းဟု အဓိပ္ပါယ်ရသည်။ အရမိဘာသာစကား ‘Kpr’ နှင့် ဆက်နွယ်မှုရှိသည်။ ဤအရာသည် ဓမ္မသစ်ကျမ်းရှိ ခရစ် တော်၏ရွေးနှုတ်ခြင်းကို ဆိုလိုသည်။ ယေရှုသည် ဤလောကသို့ ကြွလာ၍လူသားများ ကယ်တင်ခြင်းရစေရန် အတွက် အသက် (၃၀)တွင် ဗတ္တိဇံခံယူခဲ့သည်။
3. သမ္မာကျမ်းစာဆိုင်ရာ အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်း
(က) ဓမ္မဟောင်းတွင် တိရစြွာန်အားဖြင့် ယဇ်ပူဇော်ခြင်းမှတဆင့် အပြစ် ဖြေလွှတ်ခြင်းကို ပြုလုပ်ကြသည်။ (ဥပမာ-ထွက် ၃၀း၁၀၊ ဝတ် ၄း၂၀ -၂၁၊ ၁း၃-၅၊ ၁၆း၆-၂၂)
(ခ) ဓမ္မဟောင်းတွင်ဓမ္မဟောင်းကျမ်း၏ ဤပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းအတွက် ယဇ်ပူဇော်ခြင်း ဆိုင်ရာအယူအဆကို အခြေခံ၍ ဖော်ပြထားသော် လည်း ဘုရားသခင်၏ သားတော်ယေရှုခရစ်၏ ခန္ဓာကိုယ်အားဖြင့် ပူဇော်ခြင်းသာလျှင် လူသားအားလုံး ကယ်တင်ခြင်းရရှိစေနိုင်လိမ့် မည်။ ‘ခရစ်တော်သည် ငါတို့အပြစ်ကြောင့် အသေခံတော်မူ၏’ ဟု ရှင်ပေါလုက ဆိုခဲ့ပါသည်။ (၁ကော ၁၅း၃)
အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းဟူသော စကားလုံးသည် ဇာတိပကတိအပြစ်အ တွက် အလျော်ပေးရန် ခရစ်တော်အသေခံခြင်းကိုသာမဟုတ်ဘဲ လူသား အားလုံး၏ အပြစ်များအားလုံး ဖြေလွှတ်ပေးကြောင်းကိုလည်း ရည်ညွှန်း ထားပါသည်။ ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံခံယူပြီးနောက်ဤလောက အပြစ်အား လုံးသူ့အပေါ်သို့ လွှဲပြောင်းခဲ့သည်။ (မ ၃း၁၅) ခရစ်တော်သည် ကားတိုင် ပေါ်အသွေးတော်သွန်းလောင်းခြင်းအားဖြင့် လူသားများကယ်တင်ခဲ့သည်။ (ဝတ် ၁း၁-၅၊ ယော ၁၉း၃၀)
၂ ကော ၅း၁၄ တွင် ‘လူအပေါင်းတို့အတွက်’ အသေခံသည်။ အခန်းငယ် (၂၁) တွင် ‘ငါတို့အတွက်’ ဂလာတိ ၃း၁၃တွင် ‘ငါတို့အတွက် ကြောင့် ကျိန်ခြင်းကို ခံရသောသူဖြစ်၍’ စသည့်ဖြင့် ရှင်ပေါလုက ရှင်းလင်း စွာ ဖေါ်ပြထားသည်။ (ဂ ၃း၁၃) ဓမ္မသစ်ကျမ်းရှိ တချို့သော ကျမ်းပိုဒ်များ က ခရစ်တော်အားယဇ်ပူဇော်ခြင်းခံရသူအဖြစ်ရည်ညွှန်းထားသည်။ (ဧဖက် ၅း၂၊ ဆယာဟန် ၁း၂၉၊ ၃၆၊ ၁ကော ၅း၇) (သိုးသူငယ်-ဗတ္တိဇံဆ ရာယောဟန်၊ ပဿခါပွဲ - ရှင်ပေါလု)
ယေရှုယော်ဒန်မြစ်တွင် ဗတ္တိဇံခံခြင်းသည် ဤလောကအပြစ်များ အတွက်အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းအကြောင်းကို ပေါလုက အသေးစိတ်ဖော်ပြ ထားသည်။ ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံခံခြင်းအားဖြင့် ဤလောက အပြစ်များအ လုံးစုံသူ့အပေါ်သို့ကျရောက်စေခဲ့သည်ဟု ရောမ ၆ တွင် ရှင်းပြထားသည်။
ခရစ်တော်ကားတိုင်းပေါ်အသေးခံရခြင်းသည် အပြစ်အတွက်တရား စီရင်ခြင်းဖြင့်အစားထိုးပေးခြင်းဖြစ်၍ ထိုကဲ့သို့အပြစ်ဖြေရာ ယဇ်ပူဇော် ခြင်းသည် လူသားအားလုံး၏ဝိညာဉ်များအတွက်ဖြစ်သည်ဟု ဆက်လက် ဖော်ပြသည်။
ယေရှုအသေးခံခြင်းသည် ဓမ္မဟောင်းခေတ်က အပြစ်ဖြေရာယဇ် ကောင်အပြစ်ပေးဆပ်ခြင်းကို ရည်ညွှန်းပါသည်။ ဓမ္မဟောင်းတွင် လက် တင်ခြင်းနှင့် ဓမ္မသစ်မှယေရှု၏ဗတ္တိဇံသည် ဘုရားသခင်၏ပညတ်တော်နှင့် တန်းတူဖြစ်သည်။ (ဟေ ၅၃း၁၀၊ မ ၃း၁၃-၁၇၊ ဟေဗြဲ ၇း၁-၁၀၊ ၁၈၊ ၁ ပေ ၃း၂၁)
ဓမ္မသစ်ကျမ်းသည် ယေရှု၏အသေခံခြင်းနှင့်ဗတ္တိဇံဖြင့်သာ အဆုံးအ သတ်ဘဲ ခရစ်တော်နှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့၏ဟောင်းကို သေစေနိုင်သောဗတ္တိဇံ ကို ခရစ်တော်၌ခံခြင်းအားဖြင့်သာလျှင် ကျွန်ုပ်တို့၏ကယ်တင်ခြင်းသည် ပြီးပြည့်စုံခြင်းသို့ ရောက်မည့်အကြောင်း ဆက်လက်ဖော်ပြထားသည်။ (ရော ၆း၃-၇၊ ဂ၂း၁၉-၂၀)
ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်သည် အပြစ်အလုံးစုံဆောင်ယူသွားရန် ဗတ္တိဇံ ကို ပေးပြီးနောက်ပိုင်း ယေရှုသည် ကားတိုင်၌ အသေခံကြောင်း ဤအရာ က ဖော်ပြထားသည်။ ယေရှုသည် အပြစ်များကို ဆောင်ယူသွား၍ နာကြင် ခြင်းကို ခံစားခဲ့သည်သာမက စာတန်၏ချည်နှောင်ခြင်းမှ ကယ်တင်၍ လူ သားတို့ကိုယ်စား ပြစ်ဒဏ်ပေးခြင်းကိုခံယူကာ ဘုရားသခင်၏တန်ခိုး တော် ဆီသို့ ပြန်လည်ရောက်စေခဲ့သည်။
ထို့ကြောင့် ဘုရားသခင်နှင့် ကင်းကွာစေသော ကျွန်ုပ်တို့၏ အပြစ် ဟူသော ပြဿနာများကို ယေရှု၏ရွေးနှုတ်တော်မှုခြင်းဖြင့်ဖြေရှင်း၏။ ဘု ရားသခင်နှင့်လူတို့၏အကြားငြိမ်းချမ်းရေး၊ သဘောတူညီမှု ပြန်၍တည် စေကာ ကယ်တင်ခြင်း၊ ပျော်ရွှင်မှုအသက် (ရောမ ၅း၁၁၊ ၅း၁၇-၁၈) နှင့် ရွေးနှုတ်ခြင်း (မ ၃း၁၅၊ ယော ၁း၂၉၊ ဟေဗြဲ ၁၀း၁-၂၀၊ ဧ ၁း၇၊ ကော ၁း၁၄) တို့ကို ပြန်လည်ရှင်သန်စေခဲ့သည်။
ဟေဗြဲဘာသာတွင် အပြစ်ဖြေရာနေ့၏အဓိပ္ပါယ်ကို ပြန်လည်သင့် မြတ်သည့်နေ့ဟု ယူဆကြသည်။ ဣသရေလလူမျိုးများအတွက် အရေးကြီး ဆုံးသောနေ့သည် (၇) လ(၁၀) ရက်နေ့တွင် ကျရောက်သော အပြစ်ဖြေရာ နေ့ဖြစ်သည်။ (ဝတ် ၂၃း၂၇၊ ၂၅း၉) ထိုနေ့တွင် အထူးအလေးထားရမည့် လုပ်ထုံးများကိုမလုပ်လျှင် အသန့်ရှင်းဆုံးဌာနသို့ ယဇ်ပုရောဟိတ် ကိုယ် တိုင်ပင် မဝင်နိုင်ပါ။ (ဝတ် ၁၆)
ဣသရေလလူမျိုးများက အပြစ်ဖြေခြင်းကို လိုအပ်သကဲ့သို့ အသန့် ရှင်းဆုံးဌာနကလည်း လိုအပ်သည်။ ယဇ်ကောင်း၏ခေါင်းပေါ်လက်တင် ခြင်းဖြင့် အပြစ်များကင်းစင်စေရန် ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းက ယဇ်ပူဇော်ပေး ရပါသည်။ ဣသရေလလူမျိုးတို့သည် အပြစ်ဖြေရာနေ့တွင် ဘုရားသခင်၏ သန့်ရှင်းခြင်းနှင့် သူတို့၏အပြစ်တို့ကို ပြန်လည်စဉ်းစားဆင်ခြငကြသည်။
ဤအချိန်တွင် ပူဇော်ပေးကမ်းခြင်း (၁၅) မျိုး (စာရေးတံကျသော ဆိတ်အပါအဝင်) မီးရှိ့ရာယဇ် (၁၂) မျိုးနှင့်အပြစ်ဖြေရာယဇ် (၃) မျိုးကို ထာဝရဘုရား၏ရှေ့တော်၌ ပူဇော်ရမည်။ ( ဝတ် ၁၆း၅-၂၉၊ တော ၂၉း၇-၁၁) တောလည်ရာကျမ်း ၂၈း၈ တွင် ဖော်ပြထားသော ‘အခြား သော သိုးသငယ်’ကို ကျွန်တော်တို့ ရေတွက်မည်ဆိုလျှင်မီးရှိ့ရာယဇ်(၁၃) ကောင် နှင့် အပြစ် ဖြေရာယဇ် (၄) ကောင်ရှိလိမ့်မည်။
(၇) လ၊ (၁၀) ရက်နေ့တွင် ဣသရေလတို့၏ တစ်နှစ်အတွင်း ကျုး လွန်သောပြစ်များအတွက်အပြစ်ဖြေရာနေ့ဖြစ်သည်။ထိုနည်းတူ ဤလော က လူသားအားများအတွက်အပြစ်ဖြေရာနေ့သည် ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန် ထံမှ ယေရှုဗတ္တိဇံခံသောနေ့ဖြစ်သည်။ ဤနေ့သည် အပြစ်ဖြေရာနေ့ဖြစ်၍ (မ ၃း၁၃-၁၇) ဤလောက၏ အပြစ်အားလုံးကို ဘုရားသခင်က ကင်းစင် စေသည့်နေ့ဖြစ်သည်။ (မ ၃း၁၅) ဘုရားသခင်ထံ ကျွန်ုပ်တို့အပြစိအတွက် အလျော်ပေးသောနေ့လည်းဖြစ်သည်။ အလုံးစုံသောတရားတို့ကို အကုန် အစင်ကျင့်သင့်သည်ဖြစ်၍၏။
ဓမ္မဟောင်းခေတ်တွင် တခြားသောယဇ်ပူဇော်ခြင်းများနည်းတူ သန့်ရှင်းသောယဇ်ပူ ဇော်သည့်အရာကို တဲတော်တွင် ယဇ်ပူဇော်ဟိတ် ကိုတိုင် မိမိကိုယ်ကို သန့်ရှင်းစေပြီးမှ ပွဲသဘင်အတွက် ဝတ်နေကျဖြစ် သောအဝတ်အစားဝတ်ဆင်မည်အစားပိတ်ချောအင်္ကျီကိုဝတ်ဆင်ပြီးအပြစ် ဖြေရာယဇ်ကောင် နွားထီးတစ်ကောင်၊ မီးရှို့ရာယဇ်ဖို့သိုးထီးတစ်ကောင် အားဖြင့် မိမိအတွက်နှင့်မိမိအိမ်သူများအတွက် အပြစ်ဖြေခြင်းကို ပြုလုပ် ရမည်။ (ဝတ် ၁၆း၃-၄) အပြစ်ဖြေဖို့ရန်အတွက် ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းက ယဇ်ကောင်အပေါ်လက်တင်ခဲ့သည်။
လက်တင်ခြင်းသည် အပြစ်ဖြေရာနေ့အတွက် မရှိမပြစ်လိုအပ် သောကဏ္ဍဖြစ်သည်။ လက်တင်ခြင်းမပြုလုပ်ပါက ပူဇော်ထားသောယဇ် ကောင်သည် အပြစ်များအတွက်ဖြေလွှတ်ခြင်း ပြီးစီးနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ထို နည်းတူ ဣသရေလလူမျိုးတို့၏ နှစ်စဉ်ကျုးလွန်ခဲ့သည့်အပြစ်များကို ဖြေလွှတ်ရာတွင် ယဇ်ကောင်ပေါ်သို့ လက်တင်ခြင်းမပြုလျှင် အကျိုးရှိမည် မဟုတ်ပါ။
ဝတ်ပြုရာကျမ်း ၁၆း၂၁ တွင် “အာရုန်သည် အသက်ရှင်သော ဆိတ်ခေါင်းပေါ်မှာ လက်နှစ်ဖက်ကို တင်လျက် ဣသရေလလူမျိုးတို့၏ ဒုစရိုက်မှစ၍ ပြစ်မှားသောအပြစ်အမျိုးမျိုးရှိစမျှတို့ကို ဖော်ပြပြီး ဆိတ် ခေါင်းပေါ်မှာ လက်တင်ထားပြီးလျှင် တော်သို့စေလွှတ်ရမည်။”
အပြစ်ဖြေရာယဇ်အဖို့ ဆိတ်သငယ်နှစ်ကောင်၊ မီးရှို့ရာယဇ်ဖို့ သိုး တစ်ကောင်ကို ဣသရေလလူမျိုးသားထံမှယူရမည်။ တဲတော်တံခါးနား၊ ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ ဆိတ်နှစ်ကောင်ကိုသတ်၍ စာရေတံနှစ်တံချ သည်။ ဘုရားသခင်အတွက် စာရေးတံကျသောဆိတ်ကို အပြစ်ဖြေရာ ယဇ် ကောင်အပြစ်ပူဇော်၍ဣသရေလလူမျိုးတို့၏ နှစ်စဉ်ကျုးလွန်သောအပြစ် များအတွက် လျော်ကြေးအဖြစ်အခြားသော ဆိတ်တကောင်းကို အသက် ရှင်လျှက်ပူဇော်ရပြီး ထိုဆိတ်ကို တောသို့ လွှတ်ပေးရမည်။(ဝတ် ၁၆း၅)
(ဝတ် ၁၆း၇-၁၀) ယဇ်ပုရောဟိတ်လက်တင်ခြင်းအားဖြင့် ဣသ ရေလလူမျိုးတို့၏အပြစ်များသည် စာရေးတံကျသောဆိတ်ပေါ်သို့ လွှဲ ပြောင်းပေးရမည်။ ထို့အပြင် စာရေးတံကျသောဆိတ်သည် ဣသရေလ လူမျိုးတို့၏အပြစ်များကိုတောသို့ဆောင်သွား၍ ဘုရားသခင်နှင့်လူတို့အ ကြား ပြန်လည်သင့်မြတ်ခြင်းရဖို့ရန်အတွက် လွှတ်ခြင်းခံရမည်။ ဤနည်း ဖြင့် ဣသရေလလူမျိုးတို့၏ နှစ်စဉ်ကျုးလွန်သောအပြစ်များကို သန့်ရှင်းစေ ခဲ့သည်။
ထိုနည်းတူ ဓမ္မသစ်တွင်လည်း ယေရှုခရစ်သည် ဗတ္တိဇံဆရာယော ဟန်ထံမှဗတ္တိဇံ (ဓမ္မဟောင်းမှ လက်တင်ခြင်းနှင့်တူညီသည်) ခံယူ၍ ဘုရား သခင်၏ ကယ်တင်ခြင်းကို စုံလင်စေဖို့ရန် ပူဇော်ခံရသည်။ သိုးသူ ငယ်အဖြစ် ဤလောက၏အပြစ်အားလုံးကို ဆောင်သွားခဲ့သည်။ (ဝတ် ၂၀း၂၂၊ မ ၃း၁၅၊ ယော ၁း၂၉၊ ၃၆)
ဓမ္မဟောင်းတွင် တော်သို့ မလွှတ်မီအာရုန်သည် မိမိအတွက်နှင့် မိမိအိမ်သားများအတွက် နုပျိုသောနွားထီးကို အပြစ်ပူဇော်ခြင်းအဖြစ်သတ် ခဲ့သည်။ (ဝတ် ၁၆း၁၁) ထာဝရဘုရားရှေ့တော် ယဇ်ပလ္လင်မီးခဲနှင့်ပြည့် စုံသောလင်ဗန်ကို ကိုင်လျက် ညက်စွာသောနံ့သာပေါင်းအမွှေးမှုန့်ကို မိမိ လက်ဖြင့် အပြည့်ယူ၍ကန့်လန့်ကာအတွင်းသို့ ဆောင်းသွာရသည်။ ထို အခါ သူသည်သေဘေးနှင့်ကင်းလွှတ်မည့်အကြောင်း၊ နံ့စာပေါင်းအခိုးအ ငွေ့သည် သက်သေခံချက်အပေါ်တွင် ရှိသောသေတ္တာအဖုံးကိုမွှန်းစေ ဖို့ရန် နွားသွေးချို့ကိုလည်းယူ၍အရှေ့ဘက်မျက်နှာ သေတ္တာအဖုံးအပေါ်၌ လက် ညှိုးဖြင့်ဖြန်း၍ သေတ္တာဖုံးရှေ့၌လည်း ခုနှစ်ကြိမ်တိုင်အောင် လက်ညှိုးနှင့် ဖြန်းရမည်။ (ဝတ် ၁၆း၁၂-၁၉)
အပြစ်ဖြေရာနေ့တွင် ယဇ်ကောင်၏ခေါင်းပေါ်တွင် အာရုန်၏လက် တင်ခြင်းကို ချန်ထား၍မရပါ။ အာရုန်သည် ဆိတ်၏ခေါင်ပေါ်လက်တင် ခြင်းအားဖြင့် ကသရေလလူမျိုးတို့၏ ဒုစရိုက်အားလုံးနှင့် အပြစ်အားလုံးကို ထိုခေါင်းပေါ်သို့ လွှဲပြောင်းခဲ့သည်။ ထို့နောက် တော်လျော်သော သူသည် ထိုဆိတ်ကိုတော်သို့စေလွှတ်ရမည်။လွှတ်ခြင်းခံရသောဆိတ်သည်ဣသရေ လလူမျိုးတို့၏အပြစ်များနှင့်အတူ တောသို့သွား၍ သူတို့၏အပြစ်များပြေ ရန် သေခြင်းဖြင့်အဆုံးသတ်ခဲ့ သည်။ ၄င်းမှာ ဓမ္မဟောင်းခေတ်လူများတို့၏ အပြစ်ဖြေရာ ယဇ်ပူဇော်ခြင်းဖြစ်သည်။
၄င်းသည် ဓမ္မသစ်ခေတ်နှင့် အတူတူပြင်ဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်တို့ အပြစ်အတွက် ယေရှုသည် ကားတိုင်ပေါ်တွင် အသေခံခြင်း၊ ဗတ္တိဇံခံ ယူခြင်းနှင့် အသွေးတော်တို့မှတဆင့် မိမိအပေါ်တွင် ဤလောက၏ အပြစ် များလွှဲပြောင်းစေကာ စာရေးတံကျသောဆိတ်ကဲ့သို့ ပူဇော်ခြင်းခံခဲ့သည်။
ထို့ကြောင့် ယခုတွင် ယဇ်ပုဇော်ဟိတ်မင်းတည်းဟူသော ခရစ်တော်၏ ဗတ္တိဇံခံခြင်းနှင့်ကားတိုင်ပေါ်အသွေးတော်သွန်းလောင်းခြင်းမရှိလျှင် အပြစ် အားလုံးမှ ကယ်တင်ခြင်းမရနိုင်ပေ။ ဤအရာသည် ဝိညာဉ်တော်နှင့် ရေ အားဖြင့် အသစ်သောမွေးဖွားခြင်းမှာပြည့်စုံသည့်ကယ်တင် ခြင်းဖြစ်ပါ သည်။
6. လက်တင်ခြင်း၊ ဘိသိက်ပေးခြင်း
ဤအရာသည် အပြစ်ဖြေရာယဇ်ပေါ်တွင် အပြစ်များလွှဲပေးခဲ့သော ဘုရားသခင်၏ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဖြစ်သည်။ (ဝတ် ၄း၂၉၊ ၁၆း၂၁) ဓမ္မ ဟောင်းခေတ်တွင်တဲတော်ထဲ၌ ပူဇော်သောယဇ်၏ခေါင်းပေါ်သို့ လက်တင် ခြင်းအားဖြင့်သူတို့၏အပြစ်များဖြေလွှတ်ခြင်းကို ဘုရားသခင်သည် လက်ခံ ခဲ့သည်။ ယင်းသည် ဓမ္မသစ်တွင် ယေရှု၏ဗတ္တိဇံခံခြင်းဖြင့် ဖြစ်လာမည့် အရာကို ပုံဆောင်သည်။
ဗတ္တိဇံဆိုသည်မှာ (၁) ဆေးကြောရန်၊ (၂) မြှုပ်နှံရန် (ရေ၌မြှုပ်နှံ ရန်) နှင့် (၃) ဓမ္မဟောင်း ခေတ်တွင် ပြုလုပ်သကဲ့သို့လက်တင်ခြင်းအားဖြင့် အပြစ်မှကင်းဝေရန်ဖြစ်သည်။
ဓမ္မသစ်ခေတ်တွင် ဤလောက၏အပြစ်အားလုံး ယူဆောင်သွားဖို့ ရန် ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်သည် ယေရှုအား ဗတ္တိဇံပေးခဲ့သည်။ ယေရှု၏ ဗတ္တိဇံသည်ဤလောက၏အပြစ်များဆောင်သွားသည်ဟု အဓိပ္ပါယ်ရှိသည်။
ယောဟန်သည် လူသားအားလုံး၏ ကိုယ်စားနှင့် ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းအာရု န်၏ ရှေးဓလေ့ထုံးစံအရ ဗတ္တိဇံပေးခြင်းဖြင့် လောက၏အပြစ်အားလုံးကို ယေရှုအပေါ်သို့ ကမ်းပေးခဲ့သည်။ ဤအရာသည် ယေရှုဗတ္တိဇံ၏ ရည်ရွယ် ချက်ပင်ဖြစ်သည်။
ဗတ္တိဇံဟူသောဝေါဟာရ၏ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဓိပ္ပါယ်မှာ လွှဲအပ် ခြင်းနှင့်သင်္ဂြိုဟ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ခရစ်တော်၏ဗတ္တိဇံခံခြင်းသာ် လည်း အပြစ်အားလုံးခရစ်တော်ပေါ်သို့ ကမ်းပေး၍ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်စား တရားစီရင်ခြင်းခံသည်ကို ဆိုလိုသည်။ ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့ လူသား များကယ်တင်ဖို့ရန် ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များကို ဆောင်သွားရန်နှင့် အပြစ်၏ အခအတွက် အသေခံဖို့ရန် လိုအပ်ပါသည်။
ထို့ပြင် ယေရှု၏အသေခံခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့အတွက်သာမက လောကအပြစ်သား အားလုံးအတွက်ဖြစ်၍ သူ၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း သည် လူသာအားလုံးအတွက် ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းဖြစ်သည်။ သူ၏အပူ ဇော်ခံခြင်းသည် အပြစ်သားများအတွက် ကယ်တင်ခြင်းဖြစ်ပြီး ဗတ္တိဇံခံ ခြင်းသည် လူသားအားလုံး၏အပြစ်များသန့်ရှင်းစေဖို့ရန် သက်သေခံခြင်း ဖြစ်သည်။
ဓမ္မကျမ်းစာက ဖော်ပြထားသည်မှာ ထိုသို့သောဥပမာအတိုင်း ယခု တွင်ဗတ္တိဇံသည် ယေရှုခရစ်ထမြောက်တော်မူသောအားဖြင့် ငါတို့ကို ကယ် တင်တတ်သည်။ (၁ပေ ၃း၂၁) ယေရှု၏ဗတ္တိဇံသည် ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်အား လုံးကို မှန်ကန်သောကယ်တင်ခြင်းနည်းလမ်း ဖြစ်သည်။
ဘုရားသခင်းနှင့် ဆန့်ကျင်သောအရာမှန်သမျှသည် အပြစ်ဖြစ်၏။ ထိုအရာသည် ဇာတိအပြစ်အပါအဝင်အပြစ်အားလုံးနှင့် ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ် တိုင်ကျုးလွန်ခဲ့သော အပြစ်များကို ရည်ညွှန်းပါသည်။
အပြစ်များသည်ပရိဘာသာစကားများဖြင့် ‘ဟာမာတီးယား’ ဖြစ်၍ သတ်မှတ်ချက် စံချိန်ကို မမှီခြင်းဖြစ်၍ တနည်းအားဖြင့်ယေရှုကို လွဲမှာစွာ ယုံကြည်ခြင်းသည် ကယ်တင်ခြင်းမှလမ်းလွဲစေသည်။ အမှန်တရားမသိ ခြင်း၊ မယုံကြည်ခြင်း၊ မလိုက်နားခြင်းနှင့်အပြစ်ကျုးလွန်းခြင်းသည် ဘုရား သခင်ကို တန့်ကျင်တိုက်လှန်ရာရောက်သည့်အပြင် အကြီးလေး ဆုံးသော အပြစ်လည်းဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားရှေ့မှောက်တွင် အမှန်တကယ်အပြစ်မကျုး လွန်လိုပါက ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကို နားလည်းသဘောပေါက် ရန်နှင့် ယေရှုသည် မိမိ၏ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်း နားလည်းရန်လိုအပ်ပါ သည်။
ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်း ယေရှု၏ဗတ္တိဇံနှင့်ကား တိုင်ပေါ် အသေခံခြင်းတို့ကို ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သင့်သည်။ နှုတ်ကပတ် တော်ကို မယုံကြည်ခြင်း၊ မှားယွင်းစွာယုံကြည်ခြင်း၊ အမှန်တရားမှ ကင်း ဝေးခြင်းတို့သည် အပြစ်များဖြစ်သည်။
အကြီးလေးဆုံးသောအပြစ်၊ သေခြင်းသို့ရောက်စေသောအပြစ်မှာ ဘုရားသခင်သည် ဤလောကအပြစ်အားလုံးကို ယူဆောင်သွားကြောင်း မယုံကြည်ခြင်းဖြစ်သည်။ ယေရှုသည် သူ၏မွေးဖွားခြင်း၊ ဗတ္တိဇံခံခြင်းဖြင့် အပြစ်များကိုဆေးကြောခြင်း၊ကားတိုင်ပေါ်မှ အသွေးတော်နှင့် အသက်ပေး ဆပ်ခြင်းတို့ကို ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ရမည်။ နှုတ်ကပတ်တော်တွင် ဖော်ပြ ထားသောယေရှု၏ဗတ္တိဇံခံယူခြင်း၊ ကားတိုင်ပေါ်အသေခံခြင်းနှင့် ကျွန်ုပ် တို့၏အပြစ်များမှ လွတ်မြောက်စေရန် ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတို့ကို မယုံ ကြည်ခြင်းသည် အပြစ်ပြစ်၏။ (၁ယော ၅း၁၆)
ဘုရားသခင်ထံမှ ကင်းကွာနေသောသူသည် မိမိအပြစ်များကို သိရှိ လာပြီး ယေရှုခရစ်၏ဆေးကြော်ခြင်းအပေါ် ကျေးဇူးတင်သော စိတ်နှလုံး ဖြင့် ဘုရားသခင်ထံပြန်လှည့်လာခြင်းကို ‘နောင်တရခြင်း’ ဟုခေါ်သည်။
ကျွန်တော်တို့အားလုံးသည် အပြစ်ကြီးမားသောသူများဖြစ်သည်။ စစ်မှန်သောနောင်တရခြင်းသည် အမှန်တရားကိုလက်ခံ၍ လိုက်နာခြင်း ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏ ရှေ့မှောက်တွင် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များကို ဝန်ခံရ မည်။ အကယ်၍ကျွန်တော်တို့မဝန်ခံနိုင်၍ အပြစ်နှင့် တသက်လုံးနေ သွားလျှင် ငရဲပြည်သို့ ရောက်လိမ့်မည်။ ယေရှုခရစ်သည် အပြစ်သားများကို ကယ်တင်ဖို့ရန်ဤလောကသို့ကြွလာကြောင်း၊ အပြစ်အားလုံးသူ၏ ဗတ္တိဇံ ဖြင့် ယူဆောင်သွား၍ အသေခံပြီး ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကို ယုံကြည်ခြင်း အားဖြင့်ယေရှုကိုလက်ခံပြီးဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း ကျွန်တော်တို့ဝန်ခံရမည်။ စစ်မှန်သောနောင်တရခြင်းသည် ကျွန်တော်တို့၏တွေးအခေါ်များ လက် လျှော့ဖို့ရန်နှင့် ဘုရားသခင်ထံသို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိခြင်းဖြစ်သည်။ (တ ၂း၃၈)
နောင်တရခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များကို ဝန်ခံ၍ နှုတ်က ပတ်တော်သို့ ပြန်လှည့်ခြင်း၊ ရေနှင့်အသွေးတော်၏ ကယ်တင်ခြင်းကို စိတ် နှလုံးအကြွင်းမဲ့ ယုံကြည်လက်ခံခြင်းတို့ ဖြစ်သည်။ (၁ယော ၅း၆)
စစ်မှန်သော နောင်တရခြင်းဆိုသည်မှာ မိမိသည် လုံးဝအပြစ်သား ဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံရန်နှင့်ဘုရားသခင်၏သားတော်ယေရှုခရစ်ကို အပြစ်အား လုံးမှ ကယ်တင်ရှင်အဖြစ် ယုံကြည်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်တို့သည် အပြစ်မှဆေးကြောခြင်းခံရန်နှင့် ကယ်တင်ခြင်းရရှိရန်အတွက် ဘုရားသ ခင်နှင့် ပညတ်တော်ရှေ့မှာ အပြစ်သားဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံ၍ မိမိကိုယ်ကို သန့်ရှင်းစေဖို့ကြိုးစားနေခြင်းကို ရပ်တန့်ရမည်။ ထို့ပြင်ခရစ်တော်၏ ဗတ္တိဇံ နှင့် အသွေးတော်အားဖြင့်ပေးတော်မူသောရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်၏ သတင်း ကောင်းတည်းဟူသောသူ၏ကယ်တင်ခြင်း သမ္မာတရားကို ကျွန်ုပ်တို့လက် ခံရန် လိုတပ်ပါသည်။
အပြစ်ရှိသူသည် မိမိကိုယ်ပိုင်အတွေးအခေါ်နှင့်ဆန္ဒများကို စွန့် လွှတ်၍ ယေရှုထံသို့ လုံးဝဥဿုံ ပြန်လာရသည်။ ယေရှု၏ ဗတ္တိဇံအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်အားလုံးကို သူကိုယ်တိုင် သယ်ဆောင်သွားသည်ဖြစ် ကြောင်း ယုံကြည်သည့်အခါ ကယ်တင်ခြင်းရလိမ့်မည်။
တနည်းအားဖြင့် အပြစ်သားများ၏ ကယ်တင်ခြင်းနည်းလမ်းသည် ယေရှု၏ဗတ္တိဇံ၊ ကားတိုင်ပေါ် အသေခံခြင်းနှင့် ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းဟူ သောသမ္မာတရားကိုယုံကြည်လက်ခံခြင်းဖြစ်သည်။ကျွန်တော်တို့၏ အပြစ် အားလုံးသန့်ရှင်းစေဖို့ရန် ယေရှုသည် လူ့ဇာတိခံယူကာ ဗတ္တိဇံယူပြီး ကား တိုင်ပေါ်တွင် အသေခံခဲ့သည်။ ယေရှုသည် လူသားအားလုံး၏ ကယ်တင် ရှင်ဖြစ်လာရန် သေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအပေါ် လုံးဝယုံကြည်ခြင်း သည် စစ်မှန်သော နောင်တရခြင်းနှင့် စစ်မှန်သော ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်သည်။
ခရစ်ယာန်ဘာသာ၌ ကယ်တင်ခြင်းဆိုသည်မှာ အပြစ်၏တန်ခိုး (ဝါ) အပြစ်ကျုးလွန်ခြင်းမှ လွတ်မြောက်ခြင်းဖြစ်သည်။ မိမိတွင် ဘာမျှမ တတ်နိုင်ဘဲအပြစ်ကြောင့်ငရဲကိုသာ သွားရမည်ဖြစ်သောလည်း ယေရှု၏ မွေးဖွားခြင်း၊ဗတ္တိဇံခံယူခြင်း၊ကားတိုင်ပေါ်အသွေးတော်သွန်း လောင်းခြင်း အားဖြင့် အပြစ်များမှကယ်တင်သည်ဟု ယုံကြည်လက်ခံသောအခါ ကျွန်ုပ် တို့ သည် ကယ်တင်ခြင်းကို ရရှိနိုင်သည်။
ယေရှု၏အသွေး၊ ဗတ္တိဇံ၊ ကယ်တင်ခြင်းကို ယုံကြည်သောအားဖြင့် အပြစ်ကင်းသောသူသည် ကယ်တင်ပြီးသောသူ၊ ဒုတိယအကြိမ်းမွေးဖွားသူ၊ ဖြောင့်မတ်သောသူများဖြစ်သည်။
ယေရှုကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် နေ့စဉ်နှင့်အမျှ ကျုးလွန်သောအ ပြစ်များ၊ မူလအပြစ်အပါအဝင် အပြစ်အားလုံးတို့မှ ကယ်တင်ခြင်းရသော သူများသည် ‘ကယ်တင်ခြင်း’ဆိုသည့် စကားလုံးကို သုံးနိုင်သည်။ ရေနစ် နေသောသူ ကယ်တင်ခြင်းခံရသကဲ့သို့ လောက၏အပြစ်၌ နစ်နေသောသူ တို့သည်လည်း ယေရှုကို ကယ်တင်ရှင်အဖြစ် ယုံကြည်ခြင်း၊ သူ၏ဗတ္တိဇံနှင့် အသွေး၊ဝိညာဉ်ရေးဆိုင်ရာသမ္မာတရားများကို ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ကယ်တင် ခြင်းသို့ရောက် နိုင်သည်။
ဒုတိယအကြိမ် မွေးဖွားခြင်းကို ဆိုလိုသည်။ အပြစ်သားတစ်ဦး သည်ယေရှု၏လက်ဝါးကပ်တိုင်နှင့် ဗတ္တိဇံကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ဝိညာဉ် ပိုင်းကယ်တင်ခြင်းကိုခံယူသောအခါ ဒုတိယ မွေးဖွားခြင်းခံသောသူဖြစ် သည်။
ယေရှု၏အသွေးနှင့်ဗတ္တိဇံကို ယုံကြည်သောအားဖြင့် ကျွန်တော်တို့ သည် ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာအသစ်သော မွေးဖွားခြင်းကိုခံရမည်။ အပြစ်အား လုံးမှ ဆေးကြောခြင်းခံသူသည် ဒုတိယမွှေးဖွားခြင်းခံသူဖြစ်သည် (ဟေ ၉း၂၈)သုတ်သင်ပယ်ရှင်းခြင်းငှါ ပေါ်ထွန်းတော်မူ၏။ လူသည် တခါတည်း သေ၍ ထိုနောက်မှ တရားစီရင်တော်မူခြင်းကိုခံရကဲ့သို့။
အရေးကြီးသော အယူအဆမှာ အပြစ်များဖြေလွှတ်ခြင်းအ ကြောင်း သိရှိနားလည်ရန် လိုအပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော် သ တင်းကောင်းအားဖြင့်အပြစ်အလုံးစုံမှ ထာဝရသန့်ရှင်းခြင်းသို့ ရော သောအခါ အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းအခွင့်ကို ရရှိနိုင်သည်။ ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော် သတင်းကောင်း၌ မွေးဖွားခြင်းဆိုသည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့ကို ကယ်တင်ရန် ယေရှုသည် လူ့ဇာတိခံယူခြင်း၊ ဗတ္တိဇံခံယူခြင်း၊ ကားတိုင်ပေါ်အသေခံခြင်း နှင့် ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတို့ ယုံကြည်ခြင်း ကို ဆိုလိုသည်။
ယေရှုသည် လူသားအားလုံးကို ဓမ္မဟောင်းတွင် ပရောဖက့်ပြု သည့် အတိုင်းအသွေးနှင့် ဗတ္တိဇံယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် အပြစ်မှရွေးနှုတ်ခဲ့ သည်။ ကျမ်းစာတွင်ဖော်ပြထားသောရွေးနှုတ်ခြင်းသည် ယေရှု၏အသွေး နှင့်ဗတ္တိဇံကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် အပြစ်များသန့်ရှင်းစေကြောင်းကို ညွှန် ပြသည်။ အပြစ်အားလုံးသည် ယေရှုအပွေကမ်းပေးပြီး ဖြစ်သောကြောင့် လူသားတို့၏ စိတ်နှလုံး၌ အပြစ်မရှိတော့ပါ။
ယေရှု၏ဗတ္တိဇံအားဖြင့် ကျွန်တော်တို့၏ ဤပြစ်အားလုံး သူ့အပေါ် သို့လွှဲအပ်ပြီးမှသာလျှင် ဖြောင့်မတ်သောသူနှင့် ရွေးနှုတ်ခြင်းခံရသူအပြစ် ကိုယ်ကိုကိုယ် သတ်မှတ်နိုင်သည်။
ယေရှု-သည်မိမိလူတို့ကိုအပြစ်နှင့်အပြစ်ဒဏ်စီရင်ခြင်းမှကယ်ချွတ် သော သူဖြစ်သည်။ယေရှုဆိုသည်မှာ လူသားအားလုံးကို အပြစ်မှကယ်တင် သော ကယ်တင်ရှင်ကို ဆိုလိုသည်။
ခရစ်တော် - ဘိသိက်ပေးခြင်းခံရသောသူ၊ ဘုရားသခင်ရှေ့မှောက် တွင် ဘိသိက်ပေး၍ အထူးခန့်ထားသော ပုဂ္ဂိုလ်သုံးမျိုးရှိသည်။ ထိုပုဂ္ဂိုလ် များမှာ-
(၃) ယဇ်ပုရောဟိတ်များ တို့ဖြစ်သည်။
ယေရှုခရစ်သည် ရာထူးအားလုံးနှင့် ပြီးပြည့်စုံသည်။ ယေရှုသည် ရာထူးအားလုံး၏လုပ်ငန်းကို လုပ်ဆောင်သွားသည်။ ကျွန်တော်တို့ထံကယ် တင်ခြင်းနှင့်ရွေးနှုတ်ခြင်းကိုယူဆောင်လာသောဘုရင်အပြစ်လည်းကောင်း၊ ပရောဖက်အပြစ်လည်းကောင်း၊ယဇ်ပုရောဟိတ်အပြစ်လည်းကောင်းလက် ခံယုံကြည်ရမည်။ထိုဖော်ပြချက်များနှင့်အညီယေရှုခရစ်တော်ဟု ခေါ်ဆိုနိုင် ရမည်။ သူသည် အသွေးနှင့်ဗတ္တိဇံဖြင့် ဤလောက၏ အပြစ်အားလုံးအစုံမှ ကျွန်ုပ်တို့ကို ကယ်တင်သော ကောင်းကင်နိုင်ငံ၏အမြင့်ဆုံးသော ယဇ်ပု ရောဟိတ်မင်းဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် ယေရှုကို ယုံကြည်သောသူများအတွက် သူသည် ဘုရင်တကာတို့၏ဘုရင် ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သူ၏ရှေ့မှောက်သို့ ရောက်လာသောအခါ မိမိအပြစ်များကို သိမြင်လာသည်။ ကျွန်ု်ပ်တို့သည် ဘိုးဘေးများလက်ထက်မှစ၍အပြစ်သားများဖြစ်ကြောင်း၊ အပြစ်သားများ ၏မျိုးရိုးမှဆင်းသက်လာသော မွေးရာပါအပြစ်သားများဖြစ်ကြောင်း၊ ထိုအ ပြစ် သားများ၏ရလာဒ်ကြောင့် ဘုရားသခင်၏တရားစီရင်ခြင်းအောက်၌ ကျရောက်ခဲ့ရကြောင်း ကျမ်းစာမှ သွန်သင်ထားသည်။
သူ၏အသွေးနှင့်ဗတ္တိဇံအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များကို ဆေး ကြောခဲ့ကြောင်း သွန်သင်ခဲ့သည်။ ထိုအမူအရာအားလုံးကို ကျွန်ုပ်တို့အပြစ် သားများအတွက် လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
15. ယေရှုခရစ်ဗတ္တိဇံခံခဲ့သော ယော်ဒန်မြစ်
ယော်ဒန်မြစ်သည် ရေစီးသန်ပြီး ပင်လယ်ထဲသို့ အဆက်မပြတ် စီးဆင်းနေသည့် မြစ်ဖြစ်သည်။ ပင်လယ်သေ၏မျက်နှာပြင်သည် ပင်လယ် ရေမျက်နှာပြင်အောက် မီတာ(၄၀ဝ) ခန့်နိမ့်ကျသည်။ ထို့ကြောင့် ပင်လယ် သေမှရေများသည် အခြားနေရာသို့ မစီးဆင်းနိုင်ဘဲ ထိုပင်လယ်ထဲမှာပင် အပိတ်ခံနေရသည်။
ပင်လယ်သေ၏ ဆားငန်နှုန်းသည် အခြားသာမန်ပင်လယ် များ ထက် (၁၀) ဆပိုသဖြင့် မည်သည့်သတ္တဝါမျှ အသက်မရှင်နိုင်ပေ။ ထို့ ကြောင့် ပင်လယ်သေဟုခေါ်ရခြင်းဖြစ်သည်။ ယေရှုခရစ်သည် ယော ဟန်အားဖြင့် သေခြင်းမြစ် (ယော်ဒန်မြစ်)တွင် ဗတ္တိဇံခံခဲ့သည်။ ၄င်းသည် စိတ်နှလုံးတွင် အပြစ်မရှိသောသူများမှအပ လူသားအားလုံးသည် နောက် ဆုံးသော ကာလတွင် ထာဝရပြစ်တင်ရှုတ်ချခြင်းနှင့် ရင်ဆိုင်ရမည့် သင်္ကေ တဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် ယော်ဒန်မြစ်သည် အပြစ်များ ဆေးကြောရာ အပြစ် သားများ သေဆုံးရာ မြစ်ဖြစ်သည်။ အချုပ်အားဖြင့်ဆိုလျှင် ထိုမြစ်သည် ယေရှုခရစ်ဗတ္တိဇံခံခြင်းအားဖြင့် ကျွန်တော်တို့ထံမှ ယူဆောင်သွားသော အပြစ်အားလုံးကို ဆေးကြောရာ ကယ်တင်ခြင်းမြစ်ဖြစ်သည်။